Ugu horeeyay ee bauma Shiinaha 2016 Witness Sidee XCMG ee "Invisible Champion" cayaar "Inventive" Chess - Shiinaha Shanghai kacay
Ugu horeeyay ee bauma Shiinaha 2016 Witness Sidee XCMG ee "Invisible Champion" cayaar "Inventive" Chess
Taariikhda la daabacay: Feb-03-2017 Read tirada: 241
Sida ay dhacdo top mishiino injineernimada, "bauma Shiinaha" (International Trade Fair for Dhismaha Makiinado, Dhismaha Waxyaabaha Machines, Macdanta Machines iyo Dhismaha Baabuurta) ma aha oo kaliya muujinaysaa dunida ee alaabta suuqa Chinese cilmi-baaris iyo in la horumariyo ku salaysan waayo-aragnimo macmiilka Chinese laakiin sidoo kale dunida sheegayaa in aan garbaha mas'uul ka ah riixaya horumarinta mustaqbalka la technology, xigmad iyo inventiveness. In saaxadda this halkaas oo kooxda mashiinada dhismaha caalamka xafiiltamaan kasta oo kale, XCMG, hoggaamiyaha tilmaamaha horumarinta warshadaha cusub ee soo kordha oo dhan carwooyinka hore, sidoo kale siinaysaa ay dhawaaqo si rasmi ah - "Inventiveness, wax soo saarka caaqil aad for". Si fiican u fasiro mawduuca, abaabulka la yaab leh ugu muhiimsan ee kooxdu jir show mooyee, XCMG sidoo kale u saftaan qoyska ee qaybaha muhiimka ah iyo qaybaha - "horyaalka aan la arki karin" ka mid ah qalabka mashiinada.
Intelligent, tamar-keydinta iyo waxqabadka waa meelaha xudunta u engine iyo qaybaha XCMG ay qaataan in ay jebiyaan hannaankii dhamaadka sare hoos caadi cusub. "Dhismaha warshadaha mishiino ee Shiinaha furfuraya 90% ka mid ah arimaha. muhiimka ah waa in ay ka adkaan 10% ee la soo dhaafay. Waa sida kedis ah u dhowr boqol oo mitir ee la soo dhaafay in Mount Everest. Waxa loo baahan yahay awood dheeraad ah, lacag badan, xigmad ka sii ah iyo talanti oo dheeraad ah. "Like" Fulitaanka Mount Everest Aragtida "jeediyay Madaxweynaha & Xoghayaha Guddiga xisbiga Wang Min, XCMG ayaa bilaabay in ay uga badsataan" "chess inventive qaybo asaasiga ah iyo qaybaha hore. iyaga ka mid ah, XCMG Hydraulics Co., Ltd., ganacsi qayb & qayb ka aasaasay 1975, waxay ku xiran tahay ma wax kale oo aan ahayn intii afartan sannadood ah shaqada u ciyaaro chess oo waxaad ka samaysaa xubno Haydarooliga of XCMG soo bandhigaan oo dhan Shiinaha, iyo xataa in la dhoofiyo ee yaalla in Nagi ku dhawaad ​​in ka badan 20 dal iyo meelaha sida Europe, America, Russia iyo Japan oo ku saleysan cilmi-baarista iyo horumarinta ee alaabta-dhamaadka sare ciyaaray by sirdoonka, keydinta tamarta iyo waxqabadka, ka mid ah loox weyn ee mishiino caalami ah oo kala duwan dhismaha, deegaanka mishiino fayadhowrka, macdanta iftiimi mishiino, qalabka markab iyo "kooxda heysata horyaalka la arki karin" oo kale oo ugu dambeyntii noqday keentay horumarka muhiimka ah qayb ka madax banaan iyo warshadaha qayb.
"Madax" waxyaabaha jebiyaan-dhamaadka sare hannaankii wax soo saarka leh "sirdoonka"
Sida fikradda "saarka caaqil" kicinaysaa, si toos ah iyo digital teknoolajiyada caqli lagu ballaaran u codsatay in industry soo saarka, kuwaas oo dheeraad ah ma aha oo kaliya damaanad stableness tayada alaabta iyo hagaajinaysaa oolnimada hawlgalka, laakiin sidoo kale ka furmay wadada cusub ee baabi'inta la mid ah wax soo saarka iyo ballaarinta qiimaha brand. By soo maratay ku dhegganayd fursad, qaybaha muhiimka ah iyo qaybaha XCMG diirada ay cilmi-baarista iyo horumarinta on-dhamaadka sare element Haydarooliga beerta saarka. Sida XCMG heleen laba shirkadood oo Yurub ah - AMCA ka Netherlands iyo FT ka soo Germany, oo lagu daray aasaaska of Research Center Yurub ee XCMG, a "adduunka dubaridka + madax banaan cusub" R & D ecosphere of qoyska ka mid ah oo ka buuxa xubno Haydarooliga waxaa qaadashada qaab.
Ka dib markii la dedusted 15 ilbiriqsi qubeyska hawada, aad gashid workshop joogto ah-kulka nooca dhow-a. Inkastoo rogid ee mashiinada axdiga uugu oo dhegaha, agagaarka eegto, iyo shaqaalaha oo aan aad u badan qalliin laga yaabaa in la arkay, maxaa yeelay, waxaa la siiyaa heerka wax soo saarka aadka u automatic. qalabka processing Sare badalay inta badan shaqaalaha. Dhowr shaqaalaha goobta sidoo kale waxyaabaha polish hoos toosh ama si taxadir leh u qaban qalabka baaritaanka in "ogaado" alaabta sida dhakhaatiirta ... All of lama filaan ah, waxa uu dareensan yahay sida aysan soo saaridda alaabooyin warshadaha laakiin derderkii farshaxanka. Tani waa line-soo-saarka element Haydarooliga of XCMG Hydraulics Co., Ltd. filtarka Haydarooliga kala duwan soo bandhigay in carwada ku dhashay on line-soo-saarka this.
In si loo gaaro dhammaan hareeraha horumar degdeg ah oo duurka ku Haydarooliga, sanadkii 2012, XCMG qaaday tallaabooyin oo helay laba saarayaasha Yurub caan Haydarooliga - FT ka soo Germany iyo AMACA ka Netherlands ah, waqti isku mid ah, XCMG kale oo maalgeliyeen 360 milyan oo euro si ay u qotomiyey a R & D xarunta Yurub ee Germany iyo diiradda saartaa arimaha muhiimka ah iyo farsamooyinka muhiimka ah sida tubada Haydarooliga, bamka, motor iyo gacan ku haynta caaqil. Under this qaabka xoog, XCMG Hydraulics sameeyay, xiriir la xiray dunida-dubaridan wadajir lala iyo wadajir taageeray kaashanaya FT ka soo Germany, AMACA ka Netherlands, Machadka Cilmi-baarista ee Yurub iyo wixii la mid ah si ay u tijaabiso xoog dagaal xoog leh ku guulaysanaya core-dhamaadka sare qaybo Haydarooliga iyo qaybaha. In si cadaalad ah taas, korontada waalka barkin Rotary waa natiijada gaaray cilmi-baarista iyo horumarinta ecosphere this.
Sida injineer khibrad leh ee R & D European Center, Doctor Fei Kaoyin, si ay u xaliyaan talaabo dharbaaxay ee wiishashka, biiray Project "Dhiciyaan Waxaaad" kaas oo si gaar ah loogu talagalay si loo horumariyo Oxperts Consultants, qaab tamar-badbaadin ah iyo stableness. Sidee si aad u cusboonaysiiso tallaabo barkin? Doctor Fei Kaoyin mar abaabulay shir aragti dhowr jeer. Si maturely badali jeedinta Haydarooliga jira la soo jeedinta gacanta korontada, uu xoog ku dooday la saaxiibadii. In dhamaadka, waxaa soo baxday caalamka function kayd firfircoon ugu horeysay oo looga faa'iideysan waalka gargaarka saami korontada si ay ugaaraan tallaabo Escuardo of wiish. Sheeko korontada waalka barkin Rotary waa ka xasilloon oo siman inta lagu guda jiro dharbaaxay tallaabo, taas oo sii stably hagaajinaysaa xal cusub ee wax soo saarka iyo farsamooyinka of XCMG.
cilmi-baarista iyo horumarinta isku dubaridan oo goobta noocan oo kale ah wax walba ka sarreeya qoysaska saarka waalka Haydarooliga kala duwan ee XCMG. In 8 maalmood, shan filtarka waxaa la, laba nooc ururay oo ka mid ah set waxaa uu tijaabiyay ... Tani waa awoodda cilmi-baarista iyo horumarka ee hadda ka mid ah kooxda Waxaaad for filtarka Haydarooliga of XCMG. Mashruuca waxaa uu hogaaminayo Research Center Yurub ee XCMG iyo waxa taageeray XCMG culus Makiinado, XCMG Hydraulics iyo Institute XCMG. Afar-arty cilmi-baarista iyo horumarinta agaasimayo waxaa la ogaaday markii ugu horeysay si filtarka Haydarooliga of XCMG waxaa si weyn u soo hagaagtay in xuduudaheedu wax soo saarka, sida kharashka, miisaanka iyo waqtiga jawaabta, iyo tilmaamayaasha waxqabadka, sida gacanta, sirdoonka iyo stableness tallaabo. In waab ee qaybo asaasiga ah iyo qaybaha XCMG, alaabooyin kala duwan wariyaasha idinku leeyahay filtarka Haydarooliga of XCMG oo ka sarro ay "sirdoonka" ayaa noqon a "buunka cusub" oo "complete bixiyaha xal nidaamka Haydarooliga" waa in ay tagaan caalamka awoodaan, sida APVM raran xasaasi waalka unit badan iyo isbedelka ay gacanta ku biiyaha kuwaas oo si gaar ah loogu talagalay saarayaasha dukaanka caanka ah ee caalamka iyo waa in ay iska caabin 250,000 oo baaritaano saameynta iyo 20,000 oo baaritaano commutation awoodaan, XSV raran waalka unit badan oo xasaasi ah, taas oo saameyn ku dhib-free beddelaaya ka badan 1,000,000 jeer oo Yurub iyo miyir-macmalay-in-Shiinaha APV waalka unit badan.
Dhista "pass cagaaran" oo leh "daryeel tamarta"
saarka Qalabka waxaa aasaas u ah horumarinta dhaqaalaha qaranka iyo sidoo kale dammaanad muhiim ah oo update warshadaha iyo horumarinta farsamada ee warshadaha oo kala duwan. Sanadihii la soo dhaafay, our warshadaha wax soo saarka mishiino soo sara kacay si weyn, nidaamka warshadaha ayaa si joogto ah horumarinta iyo kaamilayna iyo hal-abuurka technology ayaa gaar ahaan wanaajiyey. Si kastaba ha ahaatee, la raadiyo isticmaalka tamarta iyo wasakhda yihiin qaar badan oo ka fiican. Gaar ahaan, bereladay shuruudaha deegaanka iyo horumarinta deegaanka dabiiciga ah waa in la tixgeliyaa for design iyo warshadaha ee loox weyn ee mashiinada dhismaha, iyo tagaa rayn cilmi baadhista iyo horumarinta waxyaabaha deegaanka-friendly. Sidaasay u xidhan tahay si aad u dalbato qeyb ka oo qayb teknoolajiyada wax ku ool ah iyo tamarta lagu badbaadinayo. As-fasalka ugu horeysay gudaha qayb ka mid ah iyo qayb shirkad ah, XCMG Hydraulics waxaa ka go'an inay sare u cilmi-soo saarka iyo horumarinta talaabooyin, codsanaya teknoolajiyada fudud si updates xubno Haydarooliga iyo dabagalka in ay bixiyaan macaamiisha ku ool ah iyo tamarta lagu badbaadinayo xal nidaamka Haydarooliga iyo taageero technology .
"As-fudud wax soo saarka ee tartan rasmi ah aan qaatay dhowr sano si ay u abuuraan, waxay ku xidhan tahay in ay sii kor loogu qaado guud ahaan horumarinta waxqabadka ee matoorada dabka. In mustaqbalka, waxaan sidoo kale lagu daahfuri doonaa farcanka saddexaad iyo kan afraad guud miisaanka alaabta iftiin si ay u keenaan qaab isticmaalka tamarta more ugu fiican. "Miisaanka Daawadaan tartan iftiin ku xusan by Designer Chief Zhang Qingkou alaabooyinka of XCMG Hydraulics waa biibiile telescopic aluminium debuting in cadaalad bauma this. Waa kiiska ugu horeysay ee Shiinaha. Marka walax sida loo dhiibay markii ugu horeysay, dhammaan macaamiisha ayaa soo jiitay by technology fudud oo aan marka laga reebo taas oo ka dhigaysa in la qabtay mid ka mid ah gacanta awoodaan. daawaha aluminium xoog High la ansaxiyey qayb weyn ee wax soo saarka noocan ah oo miisaankiisu yahay 2/3 yar ka badan tuubooyinka ahama si joogto ah. Ka sokow, technology processing dusha gaarka ah iyo technology taageero janjeedha ayaa sidoo kale codsatay. Sidaas darteed, wax soo saarka this waxaa la siiyaa hantida Duugga sare iyo qalbi engegnaantooda dusha, ay awood loading dhiiran waxaa soo hagaagtay, iyo nolosha adeeg waa wanaajiyey. Intaas waxaa sii dheer, ma aha oo kaliya hoos u dhigta isticmaalka awoodda jir ugu weyn, laakiin sidoo kale waa lagu shido iyo si ka sii dabacsan, sidaas gebi daynayo status quo meesha matoorada dabka gudaha u baahan tahay in ay ku tiirsanaadaan keeno biibiile daawaha aluminium.
Codsiga of qayb ka mid ah iyo qayb miisaanka iftiin technology ayaa muhiim u ah waxqabadka daryeel tamarta ee jir ugu weyn. Ilaa hadda sida aynu ognahay, dhamaan waxyaabaha dhululubo Haydarooliga, sida wiishashka kala duwan, raraha iyo baabuur bamka, waa wax soo saarka tamarta lagu badbaadinayo sheeko si gaar ah loogu talagalay oo soo saaray ku salaysan dhaxal cilmi iyo waayo-aragnimo wax soo saarka iyo dhismaha sifooyinka hore ee jir ugu weyn. By si joogto ah xoojinta ayna iyo falanqaynta codsiga fudud qaab-dhismeedka, shirkadda isticmaalaa qalabka sheeko-xoog sare si uu u bedelo qalabka dhululubo dhaqanka si loo sameeyo waxyaabaha la siiyaa qaab farsamo iyo mid farsamo wanaagsan. Sidaa darteed, iyada oo waxyaabaha caadiga ah marka la barbar dhigo, miisaanka of dhululubo dhamaystiran yahay 20% ka yar ama ka sare. Shirkadda ayaa hoggaaminaya jihada horumarka mustaqbalka ee waxyaabaha fudud.
Dhanka kale, technology remanufacturing muujiyay in qayb ka mid ah iyo sidoo kale qayb waab ayaa muhiim u ah dhisidda "pass oo doog ah", sida xawaare sare oxy-shidaalka iyo nadiifinayo elektrolytka plasma. Hadda, warshadaha remanufacturing waxaa si tartiib ah guuxayay galay channel cusub oo warshadaha mashiinada dhismaha si firfircoon sahaminta iyo isku dayaya iyo sidoo kale mid ka mid ah farsamooyinka muhiimka ah, taas oo qayb ka mid ah qaybaha muhiimka ah iyo qaybaha XCMG ay ansixiyeen in la horumariyo qiimaha haray waxyaabaha ilaa xadka ugu badan. In si ay u si buuxda u ogaadaan nadiifinta dhalashadii labaad qiimaha alaabta, shirkadda qotomiyey si gaar ah laanta remanufacturing ah in ay diiradda saaraan cilmi of remanufacturing dhululubo Haydarooliga iyo farsamooyinka muhiimka ah dayactirka dayactirka iyo foomka remanufacturing jir ganacsiga iyo nidaamka cilmi technology ah. Iyada oo badan oo remanufacturing cilmi xalkaas iyo natiijooyinka codsiga horumarinta, amar ku guuleystay mashaariicda remanufacturing weyn-tanka ka mid ah shirkadaha birta oo baaxad weyn iyo guulaha amar masruufka dhululubada American keeno, waxaa la guuleeysteen cadeeyay in suuqa post ayaa kale noqday horumar degdeg ah ganacsiga goor wanaagsan dhibic shirkadda.
Eeg qaab ka "chip", 8000 saacadood nolosha adeeg "lahayn"
Sida mishiinada waaweyn waxaa had iyo jeer ka baxsan shaqeeya iyo loolan by xaaladaha daran sida duufaan ciid iyo qoyaanka, waxaa ka badan ku xiran tahay sugnaanta waxyaabaha. In si kale loo dhigo, wax dhib ah maleh kaas oo arrimuhu teknoolajiyada warshadaha waxaa lagu soo koraya si, stableness iyo sugnaanta waxyaabaha mar kasta waa fikrad marka hore waa in aan u hoggaansamaan. Tani waxay sidoo kale ku xiran yahay ugu horeeyay ee si wada jir ah soo food by saarayaasha mishiino dhismaha iyo taageeridda alaab-qeybiyeyaasha ka qeyb ay. Sida caadiga ah oo dahab ah oo ah "technology advanced, lahayn" waxaa soo saaray, XCMG sidoo kale soo bixiyey gool ee retargeting iyo jihaynta on farsamooyinka muhiimka ah ee muhiimka ah iyo qaybo ka mid asaasiga ah iyo qaybaha. Sida keentay saaraha dhululubo Haydarooliga, XCMG Hydraulics gudbiyey warqad lagu qanco heerka this leh 8000 saacadood waxqabadka "lahayn".
"Bang-" Markii cagafcagaf ciyey, mid ka mid ah dhismaha degaanka Pilbara of Australia ayaa waxaa mar kale ka wadaan. In goobta macdanta this, meel u dhow dhulbaraha oo kulul oo qalalan, iyo kuwaas oo heerkulka dibedda had iyo jeer ka badan yahay 37 °, a dhulka qoda super-weyn-tanka ayaa isku xigta sameeyay 8000 hawlgalka qalad la'aan ah 8000 saacadood. natiijada noocan oo kale ah waxaa loo aaneynayaa in ay iftiin ee alaabta Haydarooliga of XCMG gudaha ayaa beerkiisa. "Mar adeegga Babaca-free dhululubada Haydarooliga ee Shiinaha xitaa ma lagu xaqiijin karaa by qaar ka mid ah waxyaabaha fasalka-koowaad oo caalami ah. Qaybo iyo qaybaha XCMG yihiin 'GEMS' aan qodan ee Shiinaha! "Hadalka agaasimaha qalab this aagga this macdanta Australia waxay muraayad Eebehoodna tala saarta alaabta dhululubo Haydarooliga of XCMG. "Gem" ayuu ka hadlay waa dhululubo Haydarooliga ee dhulka qoda soo bandhigay in waab ah ee qaybo ka mid asaasiga ah iyo qaybaha XCMG. Muddo dheer, sababta oo ah cilmi baaris sare iyo dhib horumarinta iyo farsamada processing adag, oo lagu daray xaalad aad u qalafsan oo shaqo jir ugu weyn, dhulka qoda ayaa looga baahan yahay sare u cushioning iyo airtightness. Sidaa darteed, wax soo saarka noocan ah waxaa loo arkaa "taaj" dhexdooda dhululubada Haydarooliga iyo update kasta waa baaray. dhululubo Boom ee cagafcagaf super-weyn-tanka markan muujiyay waa dhululubo dhulka qoda ugu weyn-tanka gudaha cilmi-baaris iyo soo saaray by XCMG Hydraulics in tixgelin of sal technology hadda jira iyo awooda qalabka. Sida alaabta caalami ah ugu weyn ee tartan rasmi ah ee qaybaha muhiimka ah iyo qaybaha XCMG, codsiga of taxane ah oo qalab cusub, teknoolajiyada cusub iyo farsamo cusub ma aha oo kaliya jebiyo dhex bottleneck technology dhululubo ee dhulka qoda gudaha super-oo baaxad weyn, laakiin sidoo kale ku guuleystay ammaan ballaaran jir ugu weyn users guriga ama dibadda. Waxaa mar kale siinaysaa fasiraadda ugu fiican ee fikrad wax soo saarka ee "technology advanced, lahayn".
Intaa waxaa dheer, waxaa kale oo jira qaar ka mid ah "waxyaabaha birta" qalaad-eegaya in waab ah oo kale oo ay bixiyaan taageero xoog leh si ay u chess "inventive" ee "horyaalka aan la arki karin": waxa ka kooban yahay saddex dhululubada la mid ah-raadinta, iyo, naaneeso sida "triplet" , waa saddex-dhululubo qalab telescopic isku xig xiga gaarka ah; ku salaysan intay sifooyinka kala duwan-yada jibs telescopic ah wiish baabuur-dhajinta, sheyga, iyada oo loo marayo saddex-dhululubo meelaynta noqnoqashada, ma si weyn kaliya hagaajin karaa awooddii intay jir ugu weyn, laakiin sidoo kale Spurs dhismeedka ayna iyo technology update jir ugu weyn ee lorry- dhajinta wiish; is-quful dhexdhexaad ah, dhamaadka-is-quful iyo dhululubo-habka oo dhan-is-quful ugu dambeyntii dhameystirtay iyada oo 28 hagaajinta jeedinta iyo baaritaano ku ool ah ka dhergin baahida isteerinka jiifku ee mashiinada dhismaha, garasho xal farsamada ee dhinacyada badan sida saxnimada imtixaanka, xawaaraha jawaab iyo nolosha adeeg ee dareysa qaybo iyo buuxi farqiga u dhexeeya xubno qoyska sida iyo alaabta laga keeno nolosha adeeg iyo isku halaynta ahbaa ee sanado badan la soo dhaafay, -baarka kala duwan farsamo muujinaya technology processing dusha, technology alxanka iyo cayriin technology wax siiyaan taageero xoog leh si ay u stableness iyo isku halaynta of qaybaha muhiimka ah iyo qaybaha XCMG, kaas oo awood u cilmi farsamo ee aasaasiga ah si ay u gaaraan heerka "lahayn".
"Dheeraad ah oo ku sahamiyaan beerta Haydarooliga la hal-abuurnimo technology, ku guuleysto tartanka caalamiga ah adeeg ka xoogbadan." In kasta oo shaqada sixitaanka keenay by cusub caadiga ah ee dhaqaalaha Chinese weli sii, qaybaha muhiimka ah iyo qaybaha XCMG qalabaysan "taageero xoog leh" ayaa kiciyay inventiveness waqti dheer ku soo laabto ka hor . Hogaamiye ahaan qaybo core-dhamaadka sare iyo qaybaha ka mid ah Shiinaha, "kooxda heysata horyaalka la arki karin" ee XCMG ku xidhan tahay in ay "gaaraan sare ee Mount Everest", guuleysto this-dhamaadka sare horumar degdeg ah "chess inventiveness" iyo immika bilowdo ka bauma Shiinaha 2016 si ay u sii dunida halkan ka iyo Sagna koboca suuqa xorta ah "Made in China"!